भावुक चुम्बन: पुरुषहरु को लागि एक संक्षिप्त पुस्तिका
पुरुष र महिला चुम्बन मन पर्छ। यसबाहेक, बच्चा छैन, गालामा मा, हामी अक्सर कार्टून वा छोराछोरीको पुस्तकहरू देखाएका रूपमा -, आफ्ना सबै प्रेममा चुम्बन राख्दै एक प्रेम एक को भित्री भाषामा पुग्न जस्तो गर्न प्रयास, र सरोष। निस्सन्देह, यो चुम्बन - यो एक कला हो, र यो मास्टर गर्न, लामो स्थितिमा अभ्यास आवश्यक छ।
जिब्रोको संग एक भावुक चुम्बन - आफ्नो प्रेम को सबै भन्दा राम्रो प्रमाण। शब्द सच्चाइ नभएको हुन सक्छ, र चुंबन कहिल्यै झूठ छैन। तथापि, तपाईं आफ्नो चुंबन सधैंभरि तातो रातो संग महिलाहरु को हृदयमा अंकित आफ्नो ओठ पहिल्याउन गर्न केही सुझावहरू सम्झना गर्न आवश्यक हुनेछ।
मानिसहरू छिटो र तिनीहरूले एक महिलाको मुखमा आफ्नो जिब्रो tucked भन्दा गहिरो, अधिक मजा यो छुटकारा छ कि लाग्छ। वास्तवमा, सबै छैन मामला छ: एक महिला - अझ कोमल र मानिसहरू भन्दा कम excitable जा रहेको छ, तर एकै समयमा एक वृद्धि संवेदनशीलता छ। अर्को शब्दमा, हाम्रो कार्यहरू केही शुरु स्त्रीको यो बस अप्रिय छ लागि उत्साह को इच्छित स्तर हुनेछ पुग्छ अघि। त्यसैले "Foreplay" को एक प्रकारको एउटा भावुक चुम्बन सुरु - बिस्तारै पहिलो अस्थायी भाषा संग छैन, एक्लै साझेदार गरेको ओठ छुनुहोस्। आफ्नो ओठको आन्दोलन त नरम र कोमल उनीहरूको साझेदार बल्लतल्ल यदि यो एक सज्जन हावा blows रूपमा महसुस गरिएको छ कि हो गरौं। बिस्तारै नै संग साझेदार तपाईं पूरा गर्न प्रयास, आफ्नो ओठको आन्दोलन तीव्रता वृद्धि। आफ्नो ओठ सार्दै गर्दा एक frantic जस्तै उनको मुख साझेदार आफ्नो जिब्रो प्रविष्ट - र तपाईंले यसलाई ठीक नै प्रतिक्रिया कसरी सक्रिय मा आनंद से छक्क छौँ। पूर्ण ओठ Immobilize, र केवल ट्याबहरू काम, आफ्नो शरीर को मिठो मायालु संघर्ष भन्दा नाजुक मांसपेशीमा व्यवस्था - तर समाप्त धेरै भावुक चुम्बन फरक हुन सक्छ छ। जिब्रोको अन्त्यमा बिस्तारै आफ्नो साझेदार र उनको देखि "विच्छेदन" चाट्नेछन्।
केही बालिका एक भावुक चुम्बन अन्त भनेर आफ्नो जिब्रो टोक्नु पर्छ विश्वास गर्छन्। यो बिन्दुमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - भारी कुरा संग टाउको मा एक केटी मारा छैन। तपाईं यसलाई रुचि छैन भने - शान्तपूर्वक केटी संग कुरा। किनभने आफ्नो बाइट्स को महिला umerivaet र मान्छे सजिलो यसलाई लिन सहमत: सामान्यतया, यो वाष्प एक निश्चित समझौता पुग्छ। सामान्यतया, यो "समझौता" को निष्कर्ष पछि भएकालाई पनि सक्रिय सुरु काट।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा: आफ्नो हात बारे मा भूल छैन! को भावुक मा र एक भावुक चुम्बन गर्ने ओठ मात्र होइन र अन्य भाषामा, र शरीर को अन्य सबै भागहरु संलग्न थिए, विशेष गरी हात छ। आफ्नो साझेदार गले, उनको अनुहार दुलार, अन्त मा, उनको नंगा - बस दाहसंस्कार मा एक सैनिक जस्तै खडा छैन, आफ्नो हात seams मा जोडेको! तपाईंको passivity र संयम देखेर उनले तपाईंलाई रुचि छैन, र अन्यथा उनको विश्वस्त गर्न, यो समय र प्रयास को धेरै हुनेछ भनी सोच्छ। तर आफ्नो हात धेरै खारेज गर्न - तपाईँ अझै सम्बन्ध विकास मा केही सीमाहरु पार गर्न एक केटी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सजिलै पनि सक्रिय भएकोमा अनुहार मा एक थप्पड प्राप्त गर्न सक्छन्।
एक भावुक चुम्बन ओछ्यानमा अन्त सक्छ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुन, त्यसैले के तपाईं आफ्नो चुंबन केटी प्रज्वलित छन् महसुस यदि - चाँडै आफ्नो टाउको मा यसको दुरुपयोग लागि कार्य को एक योजना स्क्रोल गर्नुहोस्।
र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, भावुक चुम्बन सुरिलो र प्राकृतिक हुनुपर्छ। तपाईं आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न सुझाव र चाल लाखौं दिन सक्छ, तर अझै पनि यो तपाईं निर्भर हुनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा - सिर्फ एक चुम्बन - नियमहरूमा विचार छैन, आफैलाई राख्न! हामी पनि यदि तपाईं सही छैन चुम्बन भनेर आश्वस्त, तर हृदय देखि, त्यो बुझ्न, र फेरि चुम्बन गर्न निश्चित हुन निश्चित छ। र एक सानो अभ्यास पछि तपाईंलाई याद छैन तपाईं चुम्बन को कला आवश्यक सबै सिक्न हुनेछ।
कुनै आइसक्रिम: तपाईं मिति छ अरू के हुँदैन?
कसरी एक मानिस तपाईं विचार गर्न? त्यहाँ एक तरिका हो!
एक मान्छे आँखा मा सीधा देख छ भने, यो प्रेम छैन
एक केटी पनि impregnable हुँदा, एक नारी शब्द प्रारम्भ गर्न तर कुनै अन्य विकल्प छैन
म मान्छे सोध्न के आश्चर्य?
एक प्रेम एक लागि रोमान्टिक साँझ
जिल्लाहरु क्रोस्कोडार: समीक्षा। क्रास्नोडार: शहर जिल्लाहरु
Loretti Robertino: जीवनी, फोटो
एक अयस्क के हो? फलाम अयस्क जम्मा। अयस्क रूस
कार्टून "Pepe-सुँगुर": सिफारिस हेर्ने
Gatsaniya फूल - बढ्दै र हेरविचार
कच्चा माल - प्राकृतिक स्रोतहरूको यो ... प्रजाति संरक्षण र उपयोग
ग्रील्ड तरकारी: कसरी तयार
लसुन र मेयोने संग ओवन मा आलु: व्यञ्जनहरु र खाना पकाने को सुविधाहरु
Stoptussin। तयारी समीक्षा
बोनस-Malus गुणक (एमएससी)। कक्षाहरू KBM MTPL: तालिका। एमएससी 1 क्लास3- यो अर्थ के हो?
कालो Swimsuit - beachwear एक क्लासिक विकल्प